Compressor Oil Filter Replacement sy Maintenance - Airpull (Shanghai) Sivanina Co., Ltd
VCS sy ny GHG
Rehefa-fitsaboana fitaovana Compressed Air
Dessicant Air fanamainana
Refrigerated Air fanamainana
Air Compressor Sivanina singa
Fomba fanadiovana Air Compressor Oil Filter
Compressor Oil Filter Replacement sy ny Maintenance
Ahoana no Hifidianana Solika Filter
Performance Index ny Air Compressor Air Filers
Fepetra ny Air Compressor Air Oil Separator
Ny vovoka voarakitra ao amin'ny variana rivotra dia ho nitoetra tao an-habakabaka sivana. Mba hisorohana ny visy rivotra compressor tsy ho abraded na ny rivotra menaka Separator tsy ho voasakana, ny sivana singa mila fanadiovana na fanoloana rehefa avy nampiasaina ho an'ny 500hours. Ao amin'ny tontolo izay mavesatra fampiharana vovoka misy, mila hanafohezany ny fanoloana tsingerin'ny. Atsaharo ny milina talohan'ny fanoloana ny sivana. Fa ny tanjon'ny manamaivana ny mijanona fotoana, vaovao nanadio sivana na dia nanam sivana kevitra.
1. Somary paompy roa faran 'ny sivana ambonin'ny hanohitra ny fisaka, mba hanary ny ankamaroan'ny mavesatra, maina vovoka.
2. Ampiasao ny rivotra maina ny ambany 0.28Mpa nitsoka hanohitra ny fitarihan'ny rivotra suction. Ny elanelana misy eo amin'ny nozzle sy ny taratasy miforitra, fara fahakeliny, tokony ho 25mm. Ary hampiasa ny nozzle mba nitsoka ka midina miaraka amin'ny avo.
3. Rehefa avy nanamarina, dia tokony hanary ny sivana singa raha manana lavaka, simba, na ho thinner.
1. Sokiro ny rivotra eny compressor menaka sivana, ary hodiana tsy hita izany.
2. Diovy ny sivana akora tsara.
3. Jereo ny fanatontosana ny Differential tsindry mpandefa vondrona.
4. fikojakojana ny sivana famehezana gasket diloilo.
5. Sokiro ny sivana singa ny famehezana gasket, ary avy eo dia ampiasao ny tananao mba asio tombo-kase azy mafy.
6. Jereo raha misy leakage Rehefa nanomboka ny milina. Attention: raha tsy ny rivotra compressor dia nijanona ary tsy misy teritery eo amin'ny rafitra, fa afaka manolo ny sivana singa. Ankoatra izany, tsy mangotraka ratra nateraky ny menaka mafana.
Address: 4F, ​​No.420 Huiyu Road, Jiading District, Shanghai, Shina